10% Discount အသေးစိတျ
ပရိုမိုးရှငျး PH Bakery
တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာ ကျင်းပခွင့်ရတဲ့ Birthday ပွဲအတွက်လား?
ချစ်သူ့သက်တမ်း Anniversary အတွက်လား?
ချစ်ခင်နှစ်သက်ရတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ဆောင်ပေးချင်လို့လား?
အဲလိုမျိုးတွေ အတွက် စဉ်းစားနေပြီဆိုရင်တော့ သူမပါရင်ပွဲမစည်တဲ့ Cake တွေကို B&F Weekly Promoitons နဲ့ PH Bakery မှာသွားရောက်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ 10% Off Discount ဖြင့်ဝယ်ယူ ရရှိနိုင် ပါတယ်…
PH Bakery မှာရှိတဲ့ Cake တွေကိုတော့ အရသာက ပြိုင်ဘက်ကင်းတယ်ဆိုတာ စားဖူးသူတိုင်းတော့ သိကြမယ်ထင်တယ်…
10% Discount ပေးထားတဲ့ Cake အမျိုးစားတွေကတော့ အုန်သီးအရသာတင်မကပဲ ကိတ်မှာ အုန်းသီးအမျှင်လေးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ Favour လေးကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက် CoConut Cake, ချောကလက် အရသာကိုမှ စားချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ Chocolate Cake, အပြင် Tai Tea အရသာကိုစွဲလမ်းတဲ့ သူတွေအတွက် ရှားရှားပါးပါး Thai Tea Cake ကိတ်သုံးမျိုးစလုံးရဲ့ ဈေးနူန်းတွေကတော့ 1b 6” – 15000Ks / 2b 7” – 30000Ks ဖြစ်ပါတယ်…
နောက်ထပ် အမိုက်စား Cake နှစ်မျိုးကတော့ Red Velvet Cake နဲ့ Cheese Lava Cake ဒီကိတ် (2) မျိုးရဲ့ ဈေးနူန်းတွေကတော့ 1b 6” – 18000Ks / 2b 7” – 35000Ks တွေပဲဖြစ်ပါတယ်… ဒီကိတ် (2) မျိုးစလုံးကတော့ စားလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ လျှာပေါ်မှာ စွဲကျန်သွားစေမဲ့ Cake အမျိုးစား တွေပဲဖြစ်ပါတယ်…
10% နဲ့ ဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotions ရဲ့ Mobile App (Or) Discount Coupon နဲ့ ဆိုင်မှာ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ဝယ်ယူပြီးတော့ ပရိုမိုးရှင်း ရယူနိုင်ပါတယ်…
Messenger မှတစ်ဆင့် Coupon ဒါမှမဟုတ် Mobile App ဖြင့် Order တင်ပြီး ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ 30,000 Ks နဲ့အထက် ဝယ်ယုမှ သာလျှင် 10% Discount ရရှိမှာပါ…
Mobile App နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ Mobile App ရဲ့ PH Bakery စာမျက်နှာက “ Use Now” ခလုတ်လေးကို နှိပ်ပြီးကျလာတဲ့ Box လေးမှာ အကောက်ဖွင့်ထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ကိုထည့် သွင်းပြီးတော့ “Success” စာမျက်နှာလေးကို ဝယ်ယူတဲ့အချိန်မှာ ပြသပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်..
Mobile App အသုံးပြုပုံနဲ့ပက်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အခက်ခဲတစ်စုံတစ်ရာရှိပါက B&F Weekly Promotions Head Office 09-969910128, 09-969910115 တို့ကို ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
PH Bakery ဆိုငျ
ရနျကုနျ အငျးစိနျလမျးမကွီး လှိုငျ ဘူတာရုံမှတျတိုငျ အကြျော ipenema ဖိနပျဆိုငျဘေးကလမျး အခနျး၃ မွညေီထပျ ညာဘကျခွမျး
ဖုနျးနံပါတျ : 09 781 894020
Ends Tuesday, November 19, 2019